စီးပွားအမှိုက်သိမ်းဆည်းခတဲ့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » စီးပွားအမှိုက်သိမ်းဆည်းခတဲ့….
- Joker Gyi
Posted by Joker Gyi on Feb 19, 2013 in Complaint / Claim |7comments
သူငယ်ချင်းတို့ရေ စီးပွားအမှိုက်သိမ်းဆည်းခတဲ့… အင်တာနက်ဆိုင်ကို လာပြီးတော့ စီးပွားအမှိုက်သိမ်းခတဲ့.. တစ်ခါမှလဲလာမသိမ်းဘူး… လာသိမ်းဖို့ဆိုဝေး.. .အမှိုက်ကားတောင်တစ်ရက်တစ်ခါမလာတာကို.. .အဲ့ဒါကိုအမှိုက်သိမ်းခတဲ့…စားသောက်ဆိုင်တို့.. လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တို့ကဘာလုပ်ဖို့ထားတာလဲ..တောင်းစားစရာမရှိတော့ဘူးလား… အင်တာနက်ဆိုင်ကိုတောင်လာတောင်းစားနေကြပြီးလား… ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီးလဲ… နည်းနည်းတော့များလာပြီးထင်တယ်ဗျာ
ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ.. .စီးပွားအမှိုက်သိမ်းဆည်းခတဲ့… သူငယ်ချင်းတို့ဆိုင်ကိုလဲလာတော့မယ်နော်… အဲ့လိုစာရွက်လေတွေ…အဲ့ဒါလေကိုဖတ်ပြီးနည်းနည်း စိတ်ကတိကအောင့်ဖြစ်လာလို့ ဒီစာလေကိုတင်လိုက်တာပါ… .ပို့စ်မတင်တာတောင်ကြာပြီး အခုဒီစာလေပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ… ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်တာတစ်လတောင် မကြာသေဘူး… အခုစလာပြီး…ဟီးဟီး…
About Joker Gyi
Joker Gyi has written3post in this Website..
View all posts by Joker Gyi →
Joker Gyi ရေ စာလုံးများကို Space လေးခြားပြီး ရိုက်ပေးပါလားကွယ်။
Joker Gyi says:
ဟုတ်ကဲ့..sorry …ပါနော်…ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ကြည့်ပ့ါမယ်…ကျွန်တော်လဲသိပ်မလုပ်တတ်တော့ ဖြစ်သွားတာပါ…. sorry …နော်
အမှိုက်က သီးသန့်လာကောက်ဖို့ အတွက် မဟုတ်ဘူး.. လုပ်ငန်းလုပ်ရင် လုပ်ငန်းသမားဆီက ထွက်တဲ့ အမှိုက် အတွက် အခွန်ဆောင်ရတာလို့ ယူဆပါတယ်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှိတိုင်း အခွန်ဆောင်ရတာပဲ.. နည်းတာ များတာပဲ ကွာတယ်။ သေချာတော့ နားမလည်ဘူး။
အမှိုက်ဆိုလည်း.. လုပ်ငန်းသုံးအမှိုက်က.. ပိုများတာမို့.. သီးသန့်ကားလွှတ်ကောက်တာမျိုးလုပ်ချင်လုပ်မှာပဲ..
ငွေရရင်.. စီးပွားရေးလုပ်ရင်..၀င်ငွေထဲက.. ပြန်ရှယ်ရတာတွေထဲက.. တခုဖြစ်ပါတယ်လို့…။
ဖြတ်ပိုင်းလာပေးတိုင်း လက်မခံပဲ .. နည်းနည်းလောက် ပြန်ရစ်ကြည့်လျှင် ဘယ်လိုလေးများ ထပ် ဖြစ်မလဲ သိချင်မိပါတယ် ။ လူတွေက မကျေသာ မကျေနပ်ကြတာ ၊ ရုံးသွား ဘာသွားနဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှာကြောင့် ကွန်ပလိန်းမတပ်ပဲ … ပေးလိုက်ကြတဲ့ လူများပါတယ် ။ :eee:
အင်တာနက် ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ ဆိုတော့ ၊ စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ
စည်ပင် ရဲ့ အခွန်တွေထဲ မှာ
ခွဲကောက်တဲ့ မူ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်
ရွာထဲမှာ စည်ပင်ကလူ ဒါမှမဟုတ် စည်ပင်လုပ်ငန်းနားလည်တဲ့သူ